Babambe imashi abesifazane | News24
Babambe imashi abesifazane
PHOTO: thami ka-nkosiAbesifazane bemashela ukuhlukunyezwa kuvalwa inyanga yabo ngeledlule.
NAKUBA inyanga yabantu besifazene isidlulile kodwa abaholi bezepolitiki bahlanganele ehholo eMzinto Town Hall ngaphansi kukaMasipala waseMdoni nalapho bebambe khona imashi ukubungaza inyanga yabesifazane ngoLwesithathu olwedlule.
Lo mcibi owabe uhlelwe ngumasipala wasoGwini bekuhloswe ngawo ukukhombisa nokubungaza iqhaza elabanjwa ngabantu besifazane ekulweni nemigomo yobandlululo okuhlanganisa nokuphathwa kwamapasi.
Phakathi kwalabo abathula izinkulumo zabo kuhlanganisa iMeya kaMasipala wasoGwini uMondli Chiliza nowaveza ukuthi kubaluleke kakhulu ukuba abantu besifazane banakekelwe futh kulwiswane nokuhlukumezeka okusuke kubhekiswe kubona.
Uthe wonke umuntu kumele abambe iqhaza ekulweni nokuhlukunyezwa kwabesifazane futhi kubalulekile ukuba imiphakathi ibambisane ibike izenzo zokuhlukunyezwa kwabo.
Uphinde wabeka nokuthi bonke labo abatholakala benze lokhu nokuyinto engamukelekile kumele babhekane nengalo yomthetho futhi bangakutholi nokudatshukelwa.
“Umuntu wesifazane kumele singamadoda simunakekele futhi simhloniphe ngoba uyinzalabantu futhi wabamba iqhaza elikhulu ekukhululweni kwaleli laseNingizimu Africa.”